China SDK yekurapa eyelid yekuchenesa unopukuta accessories Kugadzira uye Fekitori | SDK
Zvinoenderana neazvino dhata yenyika yekuongorora data, chiitiko chemyopia munyika yangu chiri 33.3%. Pakati pavo, chiitiko chemyopia muvadzidzi vepuraimari vadzidzi chakakwira se47.2%, chiitiko chevadzidzi junior chikoro chepamusoro chiri 75.8%, uye chiitiko chevadzidzi vechikoro chepamusoro 89.3%. Mazuva ano, zera rekutanga kwemyopia riri kutanga nekutanga, uye rasvika padanho revakuru uye vana.
Kunyanya vadzidzi vepuraimari nesekondari vadzidzi, nekuda kwemabasa anorema edzidzo, vangangoita vazhinji vevadzidzi vepuraimari nesekondari vanofanirwa kuenda kunorara mushure me11 o'clock. Ivo vanoita basa ravo rechikoro pasi pemwenje yerima masikati neusiku, uye chinhu chekutanga chavanokuvadza kuona kwavo. Kunyangwe vazhinji vadzidzi vepuraimari vanopfeka magyopio magirazi nekukasira, zvichikonzera kukuvara kusingadzoreke muhupenyu hwavo hwese ...
Kana zviri zvevakuru, vakatarisana nekombuta kwenguva yakareba, vakabata nharembozha mushure mekubva kubasa, nekutamba isingamire. Takatarisana neisina-kumira bhuruu mwenje mwenje, vamwe vanhu vane maziso akaoma, kutsamwa, mvura gobvu, kana kutadza kuvhura. Mhedzisiro yevakadzi iri pachena. Iko kuunyana kwakatenderedza maziso kunogona kudhonzwa kusvika padanho rekubata umhutu, kusviba kwemaziso eziso, mabhegi eziso ari kuwedzera kuzvimba, uye mitsetse yeropa tsvuku izere nemaziso eziso inoita kuti vanhu vataridze kupfuura makore gumi.
Saka zvisingarambike, ino inguva yekushandisa zvakanyanya kwemaziso!
Kana maziso ako ave kuneta uye mweya yako iri kuramba ichiwedzera nekuipa, saka ndokumbirawo uzive kuti iwe unofanirwa kuchengetedza maziso ako!
Kana maziso edu asina kugadzikana, vanachiremba nevanhu vakatikomberedza vanogara vachiti: Enda kumba uye wozadza tauro rinopisa kuti maziso anzwe kugadzikana, asi nei kuri iko kuchinjika kwemaziso echando anotonhorera kuti asarudze kumanikidza kunotonhora nenzira yakasarudzika?
Nheyo yacho iri nyore kwazvo. Kumanikidzwa kunotonhora kwenzvimbo kunogona kudzikamisa ganda, kuitira kuti avo vakashandisa maziso kwenguva yakareba vakurumidze kubvisa kutsvuka, kuzvimba uye kurwadziwa. Zvakare, kudzikama kwenzvimbo uye kutonhodza zvinobatsirawo parunako uye zvinoderedza kuunyana kwemaziso uye mitsara yakaoma. Kuonekwa kweganda kunoita kuti ganda reziso rive diki.
Chidimbu chekurapa kweziso kutonhora compress ine akawanda mhedzisiro ekudzivirira kweziso uye runako. Kunyangwe iwe uri murume akura, mwana, kana mushandi wemuhofisi, iwe unogona ipapo ipapo kuve nemeso akajeka uye kuona nyika yakanaka zvakajeka.
Nekushandisa inotonhorera kumanikidza kumeso, inogona kushandiswa seyadhi yekubvisa kuneta kwemaziso uye kubvisa maziso.
Inogona kudzora kuzvimba uye kubvisa marwadzo. Kana iwe uine eyelid edema munguva yakajairwa, iwe unogona kushandisa yekurapa kutonhora compress pasi pechirevo chechiremba kuti ubatsire kudzora iyo pores uye kugadzirisa mamiriro acho. Uye zvakare, kana iwe uine edema yekuzvimba, iwe unogona zvakare kutora yekurapa kutonhora compress, iyo inogona zvakare kuve neakakosha mhedzisiro. Panguva imwecheteyo, inogona kuchengetedza huropi kumuka uye kubvisa kuneta kwemaziso. Iyo zvakare ine mhedzisiro yekuparadza kupisa uye kudzikisa kuzvimba, uye zvakare inogona kubatsira kumisa kubuda kweropa nekusimudzira kupora kweronda reganda.
Iyo inotonhora compress ine imwe mhedzisiro pane myopia, inononoka kukura kwemyopia, inodzoreredza iyo ciliary mhasuru, uye inoderedza asthenopia, saka kana maziso achishandisa kutonhora compress, ine imwe mhedzisiro pane myopia. Kana ziso rinotonhora compress richishandiswa, rinosimudzira uye kwiza maacupoints emuno, ayo anogona kunyatso kuvandudza kutenderera kwenzvimbo, kutapudza kuneta kwekuona, kuzorodza mhasuru, kuitira kuti maziso agadzikane, hunhu hwekuona hunovandudzwa, uye kuona kwakadzima. Zviratidzo zvinogona kupera.
Pashure: Yakabata ruoko inotakurika isiri-mydriatic fundus kamera ML-CFC
Zvadaro: SDK Kurapa Kununura Ziso Kuneta Hot Compress
mhando yemask mask
inopisa uye inotonhora compress
Kudzivirira uye kurapwa kweiyo myopia uye amblyopia yakaoma ziso
Amblyopia, Strabismus, Myopia Kudzidziswa, Eyesigh ...
Kwakasimba Pulse Chiedza Meibomian Gland Kurapa A ...
Strabismus uye amblyopia kuongororwa kudzidziswa de ...